Thompson na Wambaugh, oji ndi oji maka ezigbo udu mmiri | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Ọdịda a anaghị adị mma. Oké ọkọchị dara n'ala ọkara Spain. Ugwu ọdịda anyanwụ bụ ebe ịta nri nke ire ọkụ nke ụfọdụ ndị na-enweghị obi esetịpụrụ na ala ndị mara mma nke Galician na Asturian. N'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ, mmụọ niile na-ekpo ọkụ kemgbe oge ụfọdụ. Ma ọ bụghị igwe ojii na mbara igwe iji mee ka ikuku dị jụụ. Ee, oge na-enye obi ụtọ maka echiche kachasị njọ nke onye na-agụ akwụkwọ. Ma ihe ụzọ ka mma karịa ile anya na ndi ozo ndi ozo.
Jim Thompson na Joseph Wambaugh abụọ bụ aha ọtụtụ toro na nsọpụrụ nke akwụkwọ akụkọ mpụ nke North America akpan akpan edi ke ofụri ofụri. Mmetụta nke ndi ozo di iche iche dika angelino James ellroy ma ọ bụ viking Jo Nesbø Na Europe ochie, onye ọ bụla hụrụ nsọpụrụ n'anya ga-agụrịrị otu n'ime ọrụ ya. Taa, m na-enyocha ụfọdụ n'ime ndị nnọchi anya ya.
1.1 Mkpụrụ obi 1.280
1.2 Ogbu mmadu n’ime m
2.1 Ndị isi ndị agha ọhụrụ
2.2 Ebe Hollywood
Enwere ụzọ iri atọ na abụọ iji kọọ akụkọ ma ejiri m ha niile, mana enwere naanị otu nkata: ihe abụghị ihe ha dị.
(Anadarko, Oklahoma, 1906 - Huntington Beach, California, 1977). Thompson ọ nwụrụ na-enweghị mmata na o nwetere oge. Fọdụ tinyere ya na American Holy Trinity nke ụdị a n'akụkụ Chandler y hammett udi. Ọ bụ ya dere ya a ezigbo ọrụ 29 akwụkwọ akụkọ ebipụtara na ọbụna karịa bipụtara. Enwere akụrụngwa dị ukwuu na ya autobiographical (Ọ bụ nwa onye ọka iwu rụrụ arụ nke gbabara Mexico wee gbuo onwe ya).
O gosiputara oku nke o biri na United States na nkera mbu nke XNUMXth century na ejiji nke ya mmanya. Ọ dịrị ndụ na akwụkwọ ya, mana ọ biri na isiokwu akwụkwọ akụkọ ya. O bipụtara ya akwụkwọ mbụ na afọ 39 ọ dekwara 12 n’ime otu afọ na ọkara. Ọ nọkwa na obe nke Amoosu Hunt nke ọrụ Senator Joseph McCarthy nke a katọrọ ya na 1951.
N'etiti ihe ndị o rụpụtara bụ ga - enwe aha dịka abụọ dị n'okpuru, kamakwa Abalị abalị o Mgbapu, n'etiti ndị ọzọ. Ọ bịanyere aka na abụọ n'ime edemede kasị ama gbara site Stanley Kubrick na ihe omuma ndi ozo abuo, Zuru okè heist y Zọ nke ebube.
Mkpụrụ obi 1.280
Nick corey bụ ahụkarị commissary nke a obere American obodo yiri ka dim ma di ocha, ma n'ezie ọ bụ onye ahụ maara ihe nke na-eme onwe ya onye nzuzu. Amamihe a bụ ezigbo ihe egwu nye ndị gbara ya gburugburu. Na mgbakwunye, omume ya niile bụ maka abamuru nke ya na-echeghị ihe ga-eme ndị ọzọ. Ihe amamihe dị na Thompson bụ inweta otu nwoke dị obi ọjọọ ma ghara inwe obi mmụọ dị ka Corey mechara hụ anyị n'anya anyị chọrọ ka ọ merie na ntuli aka ọhụrụ maka kọmishọna megide onye na-asọmpi bụ nwoke na-eguzosi ike n'ezi ihe.
Ogbu mmadu n’ime m
Edere ya 1952, na-akọ banyere ndụ dị jụụ na Central City, obodo mmanụ dị na West Texas. Ebe ahụ Onye na-anọchi Sheriff Lou Ford, onye onye ọ bụla lere anya dị ka nwoke nwere udo ma nwee obi iru ala, laghachi na "ọrịa" nke ahụ mee mpụ n’oge ntorobịa ya. Kemgbe ahụ Lou chọrọ pụtara nkịtị tinyere ihe ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ, na mmekọrịta ya na Amy Stanton, nwa agbọghọ sitere n'ezigbo ezinụlọ, dị ka ya. Mana ihe niile ga - eduga na ndụ apocalypse.
Ọ ghọrọ a mmegharị ihe nkiri na 2010 eduzi site na Michael Winterbottom ma na-agụ agụụ Casey Affleck, Kate Hudson na Jessica Alba.
Akwụkwọ Wambaugh chebere ndụ m. James ellroy
Wambaugh agbanweela 80 Jenụwarị afọ a. Nwa nwoke uwe ojii, ọ debara aha na Marines mgbe ọ dị afọ 17. Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ na kọleji Chaffey, ọ banyere LAPD n’afọ 1960, nke ọ nọrọ afọ iri na anọ wee rute onye uwe ojii. Ọ bụ onye edemede nke ọtụtụ akwụkwọ akụkọ a na-agwakọta akụkọ ifo na eziokwu. Otu n'ime ha bụkwa Ala yabasị o Onye na-acha anụnụ anụnụ.
Ndị isi ndị agha ọhụrụ
O bu akwukwo mbu ya ma ebipụta ya na 1971. Ọ na-agwa anyị Afọ ise nke ọrụ ọrụ site n'aka ndị uwe ojii atọ nke Los Angeles n'oge iri isii. N'oge a, ha na-enyocha ihe ndị ohi na-akpagbu ndị akwụna, kwụsị agha ndị otu na-eme ka esemokwu nke ezinụlọ belata. Ma ha na achoputa na ha ekwenyeghi n’ihe onye obula ghuta dika ezi ihe na ihe ojoo.
Ọ nwere a dizzying ijeụkwụ na bụ a ihe ntukwasi obi nke ihe ndi uwe ojii ha ogologo oge nke ọrụ ọfịs ma ọ bụ patrol n'okporo ámá. Ha gbanwere ya na sinima na 1972 ha wee pụta na kpakpando na ya George C. Scott na Stacey Keach.
Oge a ndị protagonists bụ ndị isi si na mpaghara Hollywood. Ha na-eme ihe ha na-eme mgbe niile n'okpuru nlekọta nke onye uwe ojii aha ya bụ Oracle. Ma usoro a ga-agbanwe mgbe usoro nke ihe ndị na-enweghị njikọ na-eweta ha ikpe kachasị ịtụnanya mere n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Mkpebi gị ga-echetara gị na na Los Angeles enweghị oke egwu na oke.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Black akwụkwọ » Thompson na Wambaugh, ndi oji agba oji maka otutu udu mmiri
Abụọ n'ime ndị dike m .. akụkọ ọma
Daalụ. Anyị na-eke ndị dike.
Fernando Aramburu meriri na National Narrative Award 2017 na "Patria"